Ụbọchị My Pet » 5 Ụzọ ghara oi Nọ ná Mkpa
Tupu ụbọchị nke bere ubé ID, ide ozi n'ekwe ntị na-elekọta mmadụ media stalking gị ike n'enweghị ọsịsọ a Ihọd si (ma ọ bụ nwa agbọghọ na-) nọmba ugboro ugboro ruo mgbe mkpịsị aka gị ghọrọ nombu si na ịpị buttons. Na oge a na ebube nke technology ezikwa gị ọ bụla enyo, ịhụ aha gị na ọnụ ọgụgụ gbapụta na ya cell anọ, ise ma ọ bụ karịa ugboro n'ụbọchị bụ ngụkọta Gbanyụọ. Otu na-aga n'ihi na akụkụ, ozi ịntanetị na-elekọta mmadụ media ozi. Ọ bụ yighị kaJohnDoe chọrọ na-agụ gị tie mkpu si tweet ya na hour awa ọ bụla ma ọ bụ nweta ederede mgbe ederede eche na ebe ị bụ na ihe ị na-eme. Nke a bụ na nkà na ụzụ Ẹkot na-eso ya gburugburu, mgbe niile peaking n'elu ubu-ya.
Ọ bụrụ na gị overdependence na gị na onye òtù ọlụlụ na-apụta dị ka ihe overdependence na technology, bee ịrapara na ibugharịa na ọrụ na-adịghị abuana texting, tweeting, ozi ma ọ bụ na uzọ ọzọ cyber eso ya.
See mgbatị. Dị ka elliptical bumps na ị na elu na ala, gị ike ịkpọ ma ọ bụ ederede ga-aga site stellar na-slopi. Ọ bụrụ na ị Akpara na texting ihe na-abịa si dị, "Hu t w? Wgats elu "na ị bụghị hà ga-clingy na-agbalị ime ka kọntaktị n'oge gị mgbatị. Dị ka ihe kwukwara ego nwere ike inyere gị aka zuru ike na de-nchegbu, na-eme ka mkpa ga-nọ ná mkpa na-aga downhill. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a mgbatị otu, adịghị na-agba ọsọ ma na-otu dị nnọọ na-esi pụọ gị onwe gị nọ ná mkpa na omume. Were gị nkịta si maka ije, na-aga n'ihi a jog gburugburu agbata obi gị ma ọ bụ see igwe kwụ otu ebe ụzọ ụkwụ gị na n'ogige ntụrụndụ obodo. Ihe bụ isi ihe na-echeta: Ahapụ gị cell n'ụlọ ma ọ bụ gị na mgbatị mkpuchi. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ya, ị nwere ike iji ya.
Kpọọ onye ọzọ. Aha otu n'ime gị vest enyi dị ka a ẹkedọhọde bere ubé. Mgbe ị banyere ime ka oku nke abụọ ma ọ bụ atọ ederede, ị ka nwere ike bulie ekwentị gị - ka anya dị ka onye na ndị ọzọ na njedebe bụghị gị Ihọd ma ọ bụ nwa agbọghọ. Ka enyi gị okwu ị na-ala, na-echetara gị na i nwere ọtụtụ ndị ná ndụ gị ka ị nọgide na-ụlọ ọrụ.
Ọ bụghị cyber stalk. Ọ bụrụ na ị na-eme na-agagharị na ya Facebook page a ole na ole kwa ọtụtụ ugboro, Ohere inweta bụ na ọ ga-amaghị ma ị na-eme ka o doo anya. Ọ bụrụ na ị n'ezie ịtụkwasị ya obi, e nwere ihe iji chọpụta ya 20 ugboro n'ụbọchị. Ka emechara, ọ bụ eleghị anya kwa smart biputere eserese nke ya onwe ya na nwa agbọghọ ọzọ mgbe ọ maara na ị pụrụ ịhụ ihe ọ. Ọ bụrụ na ọ bụ na smart, gịnị mere unu ji na ya na agbanyeghị? Ọ bụrụ na ị na-eme iji jide otu ọtụtụ glimpses ya na-elekọta mmadụ media page, adịghị mgbe niile biputere kwuru. Ọ, na ndị enyi ya, adịghị mkpa mara na ị na na na na ya na peeji nke ise ọ bụla minit.
Nọgidenụ na-a cell sabbatical. Ọ bụrụ na ị na-amalite ka jidesie creep elu na ị, etinye gị cell ụra n'ihi na otu ụbọchị. Ezie na nke a yiri ihe dị ka ihe na-apụghị, agbụrụ mmadụ ka na-ogologo oge tupu mobile igwe mgbe wee bụrụ. Tụgharịa ekwentị gị anya, etinye ya na a drawer na-eme ka atụmatụ na ndị enyi na ezinụlọ dum ụbọchị.
See obodo. Kwadebe otu mgbede na ndị enyi. Mgbe ị na-arụsi ọrụ ike iri, egwú ma ọ bụ na-ekiri ndị ọhụrụ blockbuster kpatụ aka gaa na, ị gaghị ịkpọ oku gị ịhụnanya ma ọ bụ texting ya ewetara. Ọ bụrụ na ị na-eme-ahụ onwe gị peaking na ekwentị gị, chọrọ ga-esi na a Ndenye ederede mgbe ndị enyi gị na-achọ ndị ọzọ ụzọ, tụda onwe gị azụ n'ime ugbu.